SomaliTalk.com » 2013 » September » 17
Home » Archive Maalinta September 17th, 2013
Sheekh Cabdurashiid sh Cali Suufi oo markii uhoraysay ka muxaadarayn doono Qatar jimcaha .
Sida ay dad badan oo Soomaaliiyeed lasocdaan, Qaariga Soomaaliyeed Sheekh Cabdurashiid Sheekh Cali Suufi oo kamid ah culimada dunida muslimka ugu caansan, gaar ahaan cilmiga Qur’anka, waxaa xarun u aheyd wadanka Qatar ilaa initii laga soo qaxay wadankii hooya. Inkasta oo uu dalka kamaqnaa ilaa iyo xiligaas Sheekhu weligiis kama gaabin inuu baraarujiyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan majaalka Qur’aanka. Dad...
iyo R.Wasaare Saacid: “Natiijada Shirkii Brussels waa talaabo horay loogu qaaday dib-u-dhiska dalka Soomaaliya” — Xildhibaano ka tirsan Barlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Mooshin ka dhan ah Wasaaradaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya qaarkood u gudbiyay Barlamaanka Soomaaliya oo dhawaaan uu u furmey kalfadhiyadooda Caadiga ahaa. Read More →
Magaala Brussels ee Dalka Belgium isla markaana ah Xarunta Midow Yurub waxaa si rasmi ah uga furmay Shirkii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaaliya oo Furitaankii shirkaas Khudbad dheer ka jeediyay ayaa ka hadlay arrimaha Ammaanka ee Soomaaliya iyo Xaaladaha iminka Dalka ka jira. Xasan Shiikh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday dadaalkii...